डा. केसीविरुद्ध अनसन बसेका थापा अपराधमा संलग्न - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS डा. केसीविरुद्ध अनसन बसेका थापा अपराधमा संलग्न
काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीको मागमा असहमति जनाउँदै अनसनरत विजय थापा आपराधिक पृष्ठभूमीका व्यक्ति रहेको रहस्य खुलेको छ । ओखलढुंगाको तत्कालीन सिस्नेरी गाविसका थापा यसअघि उदपुर कटारीमा चन्दा असुलीको अरोपमा सार्वजनिक अपराध सँजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा खेपेको प्रहरी अभिलेखमा देखिएको छ।
यस विषयमा प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले भने गैरजिम्मेवारीपूर्ण जफाव दिए। उनले यस विषयमा प्रहरीले क्रिमिनल डाटा रेकर्ड नहेरेको र मंगलबार मात्रै थप पत्ता लाग्ने बताए। भने, हामी डाटा रेकर्ड सिष्टम हेर्छौं यदि थापको त्यस्तो रहेछ भने कानुन बमोजिम जान्छौं। अन्नपूर्णाबाट